FAQ momba ny famokarana nomerika / Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
Inona no tombony azo amin'ny fiarahana amin'ny Protolabs? Fa maninona aho no misafidy ny orinasanao hanao ny anjarako?
Ny fanontam-pirinty 3D ataon'ny indostrialy, ny milina CNC, ny fanamboarana vy, ary ny serivisy fanamboarana tsindrona dia manome ampahany vita mivantana avy amin'ny maodely 3D CAD an'ny mpanjifa, mampihena ny mety ho lesoka. Ny lozisialy fananana dia mandeha ho azy ny famolavolana toolpath hampihenana ny fotoana famokarana ary hampihena ny vidiny.
Orinasa inona no iarahanao miasa?
Noho ny toetran'ny tetik'asa sy ny fifaninanana izay iasanay dia tsy manambara ny lisitry ny mpanjifanay izahay. Na izany aza, mahazo alalana tsy tapaka izahay hizara tantaram-pahombiazan'ny mpanjifa. Vakio eto ny tantaram-pahombiazantsika.
Moa ve ny fifanarahana tsy famoahana fanambarana (NDA) takiana mba hanaovana orinasa miaraka amin'ny CreateProto?
Ny NDA dia tsy ilaina hanaovana orinasa miaraka amin'ny CreateProto. Rehefa mampakatra ny maodelin'ny CAD amin'ny tranokalanay izahay, dia mampiasa encryption manara-penitra ary izay rehetra ampidirinao dia voaro amin'ny adidy tsiambaratelo. Raha mila fampahalalana bebe kokoa, mifandraisa amin'ny solontenan'ny kaontinao.
Inona no ampiasain'ny indostria MamoronaProto serivisy?
Manolotra indostria isan-karazany izahay, ao anatin'izany ny fitaovam-pitsaboana, ny fiara mandeha, ny jiro, ny aerospace, ny teknolojia, ny vokatra ho an'ny mpanjifa ary ny fitaovana elektronika.
Rahoviana aho no tokony hampiasa milina mifanohitra amin'ny famolavolana?
Alohan'ny hanaovana fampiasam-bola hananana fitaovana fanodinana lasitra na fanodinana milina avo lenta, dia azo inoana fa te-hanandrana ampahany iray izay akaiky kokoa ny faritra famokarana araka izay tratra ianao. Ny machining CNC no safidy tsara indrindra amin'ity toe-javatra ity.
Ho fanampin'izay, matetika ny injeniera dia mila faritra iray na angamba vitsivitsy ho an'ny fitaovana fitsapana, jigs fivoriambe na fametahana fivoriambe. Ny milina no safidy tsara indrindra eto ihany koa, fa ny fivarotana milina nentim-paharazana matetika dia mitaky fiampangana injeniera tsy miverimberina (NRE) lehibe ho an'ny fandaharana sy famokarana. Ity fiampangana NRE ity matetika dia mahatonga ny vola be dia be tsy ho zaka. Ny dingan'ny famolavolana automatique CNC dia manafoana ny vidin'ny NRE mialoha ary afaka manolotra habetsahan'ny ambany indrindra amin'ny ampahany iray amin'ny vidiny mirary ary mahazo ampahany amin'ny tananao haingana toy ny 1 andro.
Ny famolavolana tsindrona dia mifanaraka kokoa amin'ny fanohanana santionany betsaka kokoa amin'ny fizahana fizahana na tsena, fampitaovana tetezana na famokarana ambany. Raha mila faritra ianao alohan'ny anaovana fitaovana vy (mazàna 6 ka hatramin'ny 10 herinandro miaraka amina bobongolo hafa) na ny volanao dia tsy manamarina ny fitaovana famokarana vy lafo vidy, afaka manome ampahany amin'ny famokarana izahay mba hahafeno ny fepetra takiana feno (hatramin'ny faritra 10,000+ ) ao anatin'ny 1 ka hatramin'ny 15 andro.
Firy ny milina anananao?
Manana milina, lathes, mpanonta 3D mihoatra ny 100 isika izao, milina fanodinana, frein press ary fitaovana fanamboarana hafa. Miaraka amin'ny tantaran'ny fitomboantsika hatrizay, niova hatrany io isa io.
Fa maninona ianao no manana orinasa mpamokatra entana any amin'ny firenen-kafa?
Izahay dia manamboatra ny faritra rehetra ho an'i Amerika Avaratra sy ireo firenena eropeana rehetra amin'ny toeram-pivarotanay any Chine. Mandefa firenena iraisam-pirenena koa izahay amin'ny firenena maro hafa avy amin'ny toerana fampiasa any Shina.
Ahoana no hahazoako teny nalaina?
Raha te hanana teny nindramina ho an'ny serivisinay rehetra, alefaso modely 3D CAD fotsiny amin'ny tranokalanay. Mahazo teny ifanakalozana mifanakalo hevitra ao anatin'ny ora maromaro ianao miaraka amin'ny hevitra momba ny famolavolana maimaim-poana. Raha misy faritra misy olana amin'ny famolavolana natolotra, ny motera mitanisa anay dia manome fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny olana mety amin'ny famokarana ary manolotra vahaolana mety.
Azoko atao ve ny manonona ny anjarako amin'ny serivisy rehetra indray mandeha?
Azonao atao ny mahazo teny nalaina tamin'ny famolavolana sy ny fanodinana tsindrona, saingy ny fangatahana fanontana faharoa ho an'ny fanontana 3D dia mila angatahina.
Inona avy ireo karazana rakitra ekenao?
Azontsika atao ny mandray ny rakitra SolidWorks (.sldprt) na ProE (.prt) ary koa maodely 3D CAD mivaingana avy amin'ny rafitra CAD hafa mivoaka ao amin'ny IGES (.igs), STEP (.stp), ACIS (.sat) na Parasolid (. x_t na .x_b) endrika. Azontsika atao koa ny mandray rakitra .stl. Tsy ekena ny sary roa refy (2D).
Tsy manana maodely CAD 3D aho. Azonao atao ve ny mamorona iray ho ahy?
Tsy manolotra serivisy famolavolana amin'izao fotoana izao izahay. Raha mila fanampiana ianao amin'ny famoronana maodely 3D CAD momba ny hevitrao, mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka ary hampafantarinay anao ny mombamomba anao ho an'ny mpamorona izay mahafantatra ny fizotrantsika.
Manolotra safidy famaranana sy dingana faharoa miaraka amin'ny tolotra azy ve i Protolabs?
Ny safidy vita farany sy ny dingana faharoa dia azo alaina ho an'ny fanontana 3D, fanitso, metaly ary fanodinana tsindrona. Tsy manolotra dingana faharoa ho an'ny machining CNC isika amin'izao fotoana izao.
Manome serivisy fanaraha-maso (FAI) voalohany ve ianao?
Manolotra FAI izahay amin'ny faritra vita amin'ny milina sy bobongolo.
Ahoana no tsy itovizan'ny fanontana 3D amin'ny CreateProto?
Izay rehetra ataontsika ao amin'ny CreateProto dia mifantoka amin'ny fanomezana prototypes haingana indrindra sy avo lenta ary ny faritra famokarana ao amin'ny indostria. Izany dia mitaky ny haitao farany, tantanan'ny fanaraha-maso henjana. Ny fitaovan'ny fanontam-pirinty 3D misy indostrialy dia haitao sy voahaja fatratra mba hanao toy ny vaovao isaky ny fananganana. Ny famolavolana azy rehetra, ny mpiasanay voaofana dia mamokatra ny anjaranao arakaraka ny fomba fanao voahaja tsara.
Inona no atao hoe stereolithography?
Raha ny stereolithography (SL) no tranainy indrindra amin'ny teknolojia fanontam-pirinty 3D, dia mijanona ho fari-bolamena ihany koa amin'ny fahamendrehana sy ny famaranana ary ny famahana azy. Izy io dia mampiasa laser ultraviolet mifantoka amin'ny teboka kely iray, manintona eo ambonin'ny resina thermoset misy rano. Any amin'izay itarihany azy dia mivadika ho matanjaka ilay ranoka. Io dia averimberina amin'ny fizarana manify sy roa refy izay misy sosona mba hamorona faritra telo-mirefy sarotra. Ny fananana ara-materialy dia matetika ambany noho ireo an'ny sinter laser mifantina (SLS), fa ny famaranana sy ny antsipiriany dia tsy mitovy.
Inona no atao hoe sinter laser voafantina?
Ny laser sivana voafantina (SLS) dia mampiasa laser CO2 izay manakaiky ny farafara mafana vovoka thermoplastic. Eo am-povoany, dia alainy vovoka amin'ny vovoka ilay vovoka. Aorian'ny sosona tsirairay, ny roller dia mametraka vovoka vaovao eo ambonin'ny fandriana ary miverina ny fizotrany. Koa satria mampiasa thermoplastika tena injeniera ny SLS, ireo faritra voatonta 3D dia mampiseho hamafisana kokoa.
Inona ny PolyJet?
PolyJet dia manangana prototypes multi-material miaraka amina endri-javatra malefaka sy faritra sarotra misy geometrika be pitsiny. Misy karazana hamafiny (durometre), izay miasa tsara ho an'ireo singa misy endrika elastomerika toy ny gazy, tombo-kase ary trano. PolyJet dia mampiasa fizotran'ny jetting izay misy fantson-drano photopolymer ranon-javatra kely mipetaka amin'ny fiaramanidina marobe mankany amin'ny lampihazo fananganana ary sitrana isaky ny sosona. Aorian'ny fananganana dia esorina amin'ny tanana ireo fitaovana fanampiana. Ny ampahany dia vonona hampiasaina nefa tsy mila fitsaboana aorian'ny fitsaboana.
Inona no atao hoe sinterie laser mivantana?
Ny laser sivana metaly mivantana (DMLS) dia mampiasa rafitra laser fibre izay manakaiky ny vovoka metaly atôma, mametaka ny vovoka ho mafy orina. Isaky ny sosona tsirairay, ny elatra recoater dia manampy vovo-vovoka vaovao ary mamerina ny fizotrany mandra-pahatonga ny ampahany vy farany. DMLS dia afaka mampiasa ny ankamaroan'ny alloys, mamela ny ampahany ho fitaovana miasa vita amin'ny fitaovana mitovy amin'ny singa famokarana. Koa satria ny singa dia miorina arakaraky ny sosona, azo atao ny mamolavola endrika sy andinin-tsoratra anatiny izay tsy azo alefa na milina hafa.
Manao ahoana ny hakitroky ny faritra DMLS?
Ny ampahany DMLS dia matevina 97%.
Noho ny toetran'ny tetik'asa sy ny fifaninanana izay iasanay dia tsy manambara ny lisitry ny mpanjifanay izahay. Na izany aza, mahazo alalana tsy tapaka izahay hizara tantaram-pahombiazan'ny mpanjifa. Vakio eto ny fanadihadiana.
Tsy manolotra serivisy famolavolana amin'izao fotoana izao izahay. Raha mila fanampiana ianao amin'ny famoronana maodely 3D CAD momba ny hevitrao, mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka ary hanome anao fampahalalana mifandraika amin'ny orinasan-drafitra izay mahazatra ny fizotrantsika.
Ohatrinona ny vidin'ny ampahany vita pirinty 3D amin'ny CreateProto?
Manomboka eo amin'ny 95 $ ny vidiny, fa ny fomba tsara indrindra dia ny mandefa maodely 3D CAD hahazoana teny nindramina.
Inona avy ireo fahaiza-manao milina CNC an'ny CreativeProto '?
Mihodina isika ary mamadika ampahany kely dia haingana tokoa. Ny habetsahana mahazatra dia iray ka hatramin'ny 200 ary ny fotoana famokarana dia 1 ka hatramin'ny 3 andro fiasana. Manolotra ireo mpamorona vokatra izahay vita amin'ny masinina avy amin'ny fitaovana enti-miasa izay mety amin'ny fizahana asa na amin'ny fampiharana farany.
Inona no tsy manam-paharoa amin'ny fizotran'ny CreateProto?
Ny fizotranay mitanisa dia mbola tsy nisy toy izany teo amin'ny sehatry ny milina. Izahay dia namolavola rindrambaiko mitanisa ny tompony izay mandeha amin'ny cluster compute marobe ary mamokatra ny toolpaths CNC ilaina amin'ny milina ny anjaranao. Ny valiny dia fomba haingana, mora ary mora hahazoana fitanisana ary hanafarana ireo masinina.
Ohatrinona ny vidin'ny ampahany amin'ny milina ao amin'ny CreateProto?
Manomboka eo amin'ny 65 $ eo ny vidiny, fa ny fomba tsara indrindra hahitana azy dia ny fandefasana maodely 3D CAD ary ahazoana teny nindramina ProtoQuote. Satria mampiasa rindrambaiko tompona sy fizotry ny fiasa mandeha ho azy izahay, dia tsy misy ny vidin'ny injeniera tsy miverina miverina (NRE). Izany dia mahatonga ny fividianana habe ambany hatrany amin'ny faritra 1 ka hatramin'ny 200 mahomby. Ny vidiny raha ampitahaina amin'ny fanontana 3D dia azo ampitahaina amin'ny avo kokoa ihany, fa ny masinina kosa dia manatsara toetra sy fivoarana ara-nofo.
Ahoana no fiasan'ny fizotran'ny nitanisa?
Vantany vao mampakatra ny maodelim-pitaovanao 3D CAD amin'ny tranokalanay ianao dia manisa ny vidiny hamokarana ny volavolanao amin'ny fitaovana isan-karazany ilay rindrambaiko ary avy eo mamokatra "fijerena milanja" ny anjaranao. Omena teny nindramina mifanakalo izay mamela anao hanombatombana ny safidin'ny fitaovana samihafa sy habe samihafa, ary koa ny fomba fijery 3D momba ny fampitoviana ny ampahany amin'ny masininao amin'ny maodelinao tany am-boalohany miaraka amin'ireo fahasamihafana asongadiny. Jereo eto ProtoQuote.
Inona avy ireo fitaovana fitehirizana entana vita amin'ny CreateProto?
Izahay dia mitahiry karazana plastika sy vy isan-karazany avy amin'ny ABS, nylon, PC, ary ny PP hatramin'ny vy vy, aliminioma, varahina ary varahina. Jereo ny lisitr'ireo fitaovana feno stocked mihoatra ny 40 ho an'ny fikosoham-bary sy fihodinana. Amin'izao fotoana izao dia tsy manaiky fitaovana omen'ny mpanjifa ho an'ny milina izahay.
Inona avy ireo fahaiza-manao milina an'ny CreateProto? Inona ny habe mety ho anjarako?
Raha mila fanazavana momba ny haben'ny ampahany sy ny fiheverana hafa momba ny fikosoham-bary sy ny fihodinana, azafady mba jereo ny torolàlana momba ny famolavolana sy ny familiana ny torolàlana momba ny famolavolana.
Nahoana aho no tokony hanana ny anjarako amin'ny milina fa tsy 3D pirinty?
Ny faritra misy ny masinina dia manana ny tena toetran'ny fitaovana nofidinao. Ny fizotrantsika dia ahafahanao mahazo ireo masinina vita amin'ny plastika sy vy mafy ao anaty fe-potoana mitovy, raha tsy haingana kokoa noho ireo faritra vita pirinty 3D.
Inona avy ireo fahaiza-manao metaly vita amin'ny metatra?
Izahay dia mamorona prototypes azo ampiasaina sy ny faritra ampiasainay farany haingana tahaka ny 3 andro.
Amin'ny alàlan'ny famolavolana automatique sy famokarana automatique dia afaka mahazo ampahany vy metaly kalitao ao an-tananao ao anatin'ny andro vitsivitsy ny CreateProto.
Ohatrinona ny vidin'ny ampahany vy amin'ny Creamproto?
Miovaova ny vidiny nefa afaka manomboka eo amin'ny $ 125, miankina amin'ny geometry sy ny fahasarotana. Ny fomba tsara indrindra hanombanana ny vidinao dia ny fampidinana ny modelyo amin'ny tranokalanay hahazoana teny madiodio MAIMAIM-PO. Raha te handoa vola sy famolavolana eo noho eo ianao ho an'ny tamberina fanamboarana, alao ny eRapid ho an'ny Solidworks maimaim-poana.
Ahoana ny fomba fiasan'ny fizarana metaly?
Ho an'ny teny nalaina tamin'ny metaly dia mila mampakatra ny maodelin'ny CAD sy ny mason-tsivinao ianao amin'ny quote.rapidmanufaktururing.com. Hahazo andinin-tsoratra amin'ny antsipiriany ianao ao anatin'ny ora maromaro. Raha vantany vao vonona hanafatra ampahany ianao dia afaka miditra amin'ny myRapid hametraka ny kaomandinao.
Inona avy ireo fitaovana manana stockPlay vita amin'ny metaly?
Izahay dia mitahiry fitaovana metaly isan-karazany, anisan'izany ny vy tsy misy alikaola, aliminioma, varahina ary varahina. Jereo ny lisitry ny fitaovana feno tahiry ho an'ny fanamboarana vy.
Inona avy ireo fahaiza-manaon'ny CreateProto? Inona ny habe mety ho anjarako?
Raha mila fanazavana momba ny haben'ny ampahany sy ny fiheverana hafa momba ny famoronana vy, dia jereo ny torolàlana momba ny famolavolana vy.
Inona avy ireo fahaiza-manao famolavolana tsindrona an'ny CreatProto?
Manolotra plastika vita amin'ny silika plastika sy ranon-javatra koa izahay ary koa manaparitaka sy mampiditra famolavolana amin'ny habetsaky ny 25 ka hatramin'ny 10,000+. Ny fotoana famokarana mahazatra dia 1 ka hatramin'ny 15 andro fiasana. Ny famolahana tsindrona haingana dia manampy ny mpamorona vokatra hahazo prototypes sy faritra famokarana izay mety amin'ny fanandramana miasa na fampiasana farany ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Izahay dia nanao automatique ny fizotry ny fitanisana, famolavolana ary famolavolana bobongolo mifototra amin'ny maodely ampahany 3D CAD nomen'ny mpanjifa. Noho io automatisation io, sy ny fandefasana rindrambaiko amin'ny cluster compute ultra-fast, matetika izahay dia manapaka ny fotoana famokarana ho an'ireo faritra voalohany ho iray ampahatelon'ny an'ny fomba mahazatra.
Ohatrinona ny vidin'ny ampahany vita amin'ny tsindrona amin'ny CreateProto?
Manomboka amin'ny 1.495 $ ny vidiny, miankina amin'ny geometry sy ny fahasarotana. Ny fomba tsara indrindra hanombanana ny vidiny dia ny fampidinana ny maodelinao amin'ny tranokalanay handraisana teny ifampiresahana ao anatin'ny ora maromaro. Protolabs dia afaka mamorona ny lasitrao amin'ny ampahany kely amin'ny vidin'ny famolavolana tsindrona nentim-paharazana noho ny lozisialy fandalinana an-tsokosoko, ny fizotrany mandeha ho azy ary ny fampiasana bobongolo aluminium.
Ny fahazoana ny teny ifampiresahana dia hampiseho ireo fitaovana sy famaranana azo atao, hanasongadinana ireo olana mety hitranga amin'ny fanamboarana ny anjaranao, ary haneho ny fifandimbiasana haingana sy ny safidy fandefasana (miankina amin'ny jeometry anao). Hahita ny vidin'ny vidin'ny fitaovana sy ny fisafidianana anao ara-potoana ianao — tsy mila manonona intsony. Jereo eto ohatra ny ProtoQuote.
Inona ny resina azoko ampiasaina (na tokony) ampiasaiko?
Ny mpamorona dia tokony handinika ireo fananana manokana ho an'ny fampiharana toy ny tanjaka mihombo, ny fanoherana ny fiatraikany na ny fikojakojana, ny toetra mampiavaka ny mekanika, ny famolavolana endrika ary ny vidin'ny resina rehefa mifantina resina iray. Raha mila fanampiana amin'ny fisafidianana fitaovana ianao dia aza misalasala miantso anay.
Inona avy ireo resin-tsokosoko ao amin'ny CreateProto ho an'ny famolavolana tsindrona?
Miorina resina thermoplastic mihoatra ny 100 izahay ary mandray resins omen'ny mpanjifa maro ihany koa. Jereo ny lisitra feno resin-kazo voatahiry Protolabs.
Raha mila fanazavana momba ny haben'ny ampahany sy ny fiheverana hafa momba ny famolavolana tsindrona dia mba jereo ny torolàlana momba ny famolavolana anay.
Fa maninona aho no tokony hividy ampahany bobongolo fa tsy ampahany voatonta 3D?
Ireo faritra bobongolo avy amin'ny Protolabs dia hanana ny tena toetran'ny fitaovana nofidinao. Miaraka amin'ny tena fananana ara-nofo sy ny fanatsarana ny famitana ny tampony, ny faritra miendrika tsindrona dia mety amin'ny fizahana sy famokarana fampiasana farany.
Inona ny fanovana fanoloran-kevitra momba ny CreateProto?
Ny Proposed Revision dia fanovana natolotra ho an'ny géometryo ampahany mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fahaizan'ny fizotran'ny fanamboarana haingana ny famolavolana anao.
Inona ny endrika rakitra handefasanao ahy?
Miankina amin'ny fisie loharano io. Amin'ny ankapobeny dia manome rakitra STEP, IGES, ary SolidWorks izahay.
Raha tiako ny fanovana, inona no tokony ataoko?
Azonao atao ny mividy ny ampahany satria aseho amin'ny fanovana natolotra raha:
tsy misy fanovana takiana tsy voavaha.
Manaiky ny fanoloran-kevitra narosonao ianao amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny boaty ao amin'ny fizarana fahatelo amin'ilay teny nalaina.
Raha tiako ny fanovana fa te-hanafatra amin'ny rakitrao loharano aho, inona no hataoko?
Hanavao ny maodelinao mba hifanaraka amin'ny Proposed Revision ary averina alefa indray:
Tsindrio ny bokotra 'Download Modely nohavaozina' ao amin'ny fizarana roa amin'ilay teny nalaina mba hampitahana ny geometry Protolabs amin'ny kinova voalohany.
Avereno atao ny fanovana asehon'ny Protolabs amin'ny fitaovana fanaingoana anao ary alefaso indray ny anjaranao ho an'ny teny nindramina. Ny fitanisana indray dia takian'ny fiasanay mba hiantohana ny lalao eo amin'ny teny nalaina sy ny ampahany.
Ny teny namboarina dia tokony haverina tsy misy fanovana takiana ary arak'izany, tokony ho voalamina ny anjaranao.
Inona no tokony hataoko raha tsy tiako (na tsy azoko) ny fanovana?
Ny olana momba ny famolavolana dia matetika no voavaha amin'ny fomba maro. Ianao dia afaka:
ovao amin'ny fomba hafa ny géometriam-bidinao hahatratrarana ny tanjon'ny fanoloran-kevitra naroso.
mifanakaloza hevitra momba ny vahaolana hafa amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny injeniera fampiharana ao amin'ny + 1-86-138-2314-6859 na customerervice@createproto.com.
Ahoana no hahitako bebe kokoa momba ny antony nanaovanao ny fanovana?
Raha hiresaka momba ny fepetra takiana amin'ny fizotrany dia mifandraisa amina injeniera fampiharana ao amin'ny + 1-86-138-2314-6859 na customerervice@createproto.com.
Misy sarany fanampiny ve? Inona ny vidin'ity serivisy ity?
Ny fanoloran-kevitra natolotra dia atolotra maimaim-poana. Ny jeometriôma nohavaozina dia omena vidiny araka izay mety ho anjarany. Ny fiovana sasany dia hisy fiatraikany amin'ny fiakarana vidiny na fidinana. Amin'ny fampiharana, ny ankamaroan'ny fiovana amin'ny vidin'ny geometrika kely dia tsy azo tsinontsinoavina.
Serivisy famolavolana ve ity?
Tsy manolotra serivisy famolavolana vokatra izahay. Ny fanoloran-kevitra naroso dia atolotra mba hanehoana ny géometry izay mifanaraka amin'ny fizotry ny famokarana.
Fa maninona no nangatahana fanavaozana ny plug-in Protoviewer-ko?
Ny fanoloran-kevitra naroso dia mifanaraka amin'ireo kinova Protoviewer vaovao ihany.
Inona no hitranga raha tsy miasa mifototra amin'ny fanovana Protolabs ny anjarako?
Ianao no tompon'andraikitra amin'ny famolavolana ampahany sy ny asany.
Afaka miala amin'ny fizotran'ny Proposed Revision ve aho?
Manantena izahay fa hitanao ho sarobidy io serivisy io, fa raha tianao ny tsy handray anjara, mariho tsara rehefa mampakatra ny anjaranao ianao.
Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana, Cnc Prototyping haingana, Cnc Prototyping, Prototyping haingana, Prototyping haingana,